Online Marg | मनोज गजुरेलले दोस्रो विवाह गरेपछि पूर्वपत्नी मिना ढकालको फेसबुक स्टाटसतर्फ मोडियो सबैको ध्यान, के लेखिन् त्यस्तो ? (स्टाटससहित)
२५ असोज, काठमाडौं । चर्चित हास्यकलाकार मनोज गजुरेल वैवाहिक जीवनमा बाँधिएका छन् । उनले न्याय सेवाकी अधिकृत मञ्जु पोखरेलसँग सोमबार विवाह गरेका हुन् ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस र तस्वीर राख्दै गजुरेलले आफूहरु विवाह बन्धनमा बाँधिएको जानकारी दिएका हुन् । मनोज र मञ्जुले भक्तपुरको डोलेश्वर मन्दिरमा विवाह गरेका हुन् ।
दोस्रो विवाह गरेका मनोजको पहिलो विवाह चार वर्षअघि सम्बन्ध विच्छेदमा टुंगिएको थियो । पहिलो श्रीमतीका तर्फबाट मनोजका एक छोरा र एक छोरी छन् । सामाजिक सञ्जाल मार्फत गजुरेलले आफ्नो बारेमा काल्पनिक समाचार नलेखिदिन पनि सञ्चारकर्मीहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।
आफन्त, साथी तथा शुभचिन्तकहरुमा सुखद जानकारी !, जीवन सधैँ सरल रेखामा नहिंड्ने रहेछ । मेरो लामो वैवाहिक जीवन ४ बर्षपहिले कानुनीरुपमा टुंगिएको कुरा यहाँहरुलाई विदितै छ । त्यसयता म मेरा छोरा र छोरीको एकल अभिभावक भएर बसिरहेको जानकारी पनि जगजाहेर नै छ ।
जीवनयात्राको दौरानमा आत्मीय साथको आवश्यकता महशुस हुनु स्वाभाविकै हो । त्यसैगरी मेरा बाबु-नानीको शिक्षा, स्वास्थ्य र भविष्यको बारेमा पनि संवेदनशिल हुनु जरुरी थियो । यी दुबै अवस्थामा साथदिने सहयात्रीको अभाव समयक्रममा खड्किँदै आयो ।
बाबुनानीको आग्रह पनि यस्तै आउन थाल्यो । यसै क्रममा नेपाल सरकारको न्याय सेवाकी अधिकृत मन्जु पोखरेलजीसँग मेरो चिनजान हुनपुग्यो । बिस्तारै हाम्रो घनिष्टता बढ्न थाल्यो । एकैखालको परिबेश र उस्तै खालको भोगाईबाट गुज्रिएका हामी अन्ततः सहयात्रा गर्ने निर्णयमा पुग्यौं ।
अन्त्यमा, पुनः सम्पुर्णं आफन्त, साथी तथा शुभचिन्तकहरुलाई यो सुखद जानकारी गराउदछौँ कि हामीले आज मिति २०७८ साल असोज २५ गते सोमबार बिहान डोलेश्वर महादेवकाे दर्शन गर्यौँ । त्यसपछि परिवारको उपस्थितिमा त्यहीँ सिन्दुरपोते गर्यौँ । अनि, सपरिवार मानवसेवा आश्रम (कौशलटार)मा रहेका बुवाआमालाई खाना खुवाएर/खाएर विवाह सम्पन्न गरेकाछौँ । परिस्थिति सिर्जित हाम्रो यो नयाँ अध्यायलाई शुभकामना र आशिर्वाद प्रदान गर्ने सबैलाई धन्यवाद 🙏 नवदुर्गा भवानीले सबैको रक्षा गरुन् । बडादशैँकाे हार्दिक शुभकामना 🌷
मनोज गजुरेलको विवाह भएको समाचार सार्वजनिक भएपछि उनकी पूर्वपत्नी मिना ढकालले कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छिन् भन्नेतर्फ धेरैको चासो छ । यही बीच गजुरेलकी पूर्वपत्नी ढकालले प्रतिक्रिया दिएकी हुन् । स्टप स्टप स्टप भन्दैं ढकालले ईन्बक्समा अनावश्यक म्यासेज नगर्न भनेकी हुन् ।
उनले शुभचिन्तक र आफन्तहरुले मनोजले विवाह गरेको फोटो उनलाई म्यासेन्जरमा पठाउन सुरु गरेपछी उनले वाहियात म्यासेज इनबक्समा नपठाउन भन्दैं स्टाटस लेखेकी हुन् ।
उनले आफ्ना पूर्वपतिको दोस्रो बिहेलाई ईंगित गर्दै अर्को स्टाटस समेत लेखेकी छन्् । उनले दार्शनिक स्वभावका मुकुन्द घिमिरे उर्फ मुकुन्देको फेसबुक स्टाटसलाई शेयर गर्दै त्यही त नि, के नै ठूलो र नौलो काम गर्या होर ? भन्दैं क्याप्सन लेखेकी छन् ।